My iPhone Haizoregi Vibrating! Heino Iyo Chaiyo Kugadzirisa. - Iphone
isa maapplication muarufabheti
apple iphone 5 hapana sim kadhi yakaiswa
sei yangu app chitoro isiri kushanda pane yangu iphone
kupi kwekugadzirisa yakatsemuka iphone 6 skrini
My iPhone Haizoregi Vibrating! Heino Chaicho Kugadzirisa.
Yako iPhone inoramba ichidedera uye hauna chokwadi nei. Dzimwe nguva dzinobvunda zvisina mutsindo pasina chikonzero zvachose! Muchikamu chino, ini ndichatsanangura zvekuita kana yako iPhone isingamire kudedera .
Chinhu chekutanga kuita kana yako iPhone isingamise kudedera kuidzima uye kudzoka. Kutangazve yako iPhone kwakajairika gadziriso kune mashoma software matambudziko.
Kana iwe uine iPhone 8 kana yapfuura, pinda uye bata bhatani remagetsi kudzamara 'slide kumagetsi kudzima' ichioneka pachiratidziri. Kana iwe uine chero iPhone X, tinya uye bata bhatani bhatani uye chero vhoriyamu bhatani. Rova zvakasimba ikoni yemagetsi kuruboshwe-kuenda-kurudyi kuyambuka 'slide kumagetsi kudzima' kuvhara yako iPhone.
Mirira anenge masekondi makumi matatu kuti uve nechokwadi chekuti iPhone yako yavhara nzira yese, wobva wadzvanya wabata bhatani remagetsi (iPhone 8 kana kumberi) kana bhatani repadivi (iPhone X) kuti ibatidze zvakare.
Yako IPhone Yakagwamba Uye Inotetemera?
Kana yako iPhone isingaregi kudedera uye chando, uchafanira zvakaoma itangezve yako iPhone pane kuidzima yakajairwa nzira. Yakaomarara yekumisikidza inomanikidza yako iPhone kuti ikurumidze kudzima uye kudzokerazve, iyo inogona kugadzirisa madiki software software senge kana yako iPhone yaita chando.
Kuomesa reset an iPhone SE kana pakutanga , Dhinda uye ubatise bhatani remagetsi uye bhatani reKumba panguva imwe chete kusvikira chidzitiro chadzima uye logo yeApple yaonekwa. Pa iPhone 7 , panguva imwe chete bata uye bata vhoriyamu pasi bhatani uye bhatani remagetsi. Pa iPhone 8, 8 Plus, uye X , dzvanya uye usunungure vhoriyamu kumusoro bhatani, wobva vhoriyamu pasi bhatani, wobva wadzvanya uye bata rerutivi bhatani.
Vhara Zvese Vhura iPhone Mapurogiramu
Anapp inogona kunge isiri kushanda kana kukutumira iwe zviziviso kumashure pane yako iPhone, ichikonzera kuti irambe ichidedera. Nekuvhara ese maapplication pane yako iPhone, unogona kugadzirisa rinogona kuitika software ravari kukonzera.
Usati wavhara maapplication pane yako iPhone, uchafanirwa kuvhura iyo switch switch. Kuti uite izvi, pinda-pinda bhatani reKusha (iPhone 8 uye kumberi) kana swipe kumusoro kubva pasi kusvika pakati pechidzitiro (iPhone X). Iye zvino zvaunenge uri mu switch switch, vhara maapplication ako nekuaswipta iwo kumusoro uye kubvisa nguva yechiso.
Tarisa uone A Software Gadziriso
Kana iwe uchimhanyisa yechinyakare vhezheni yeIOS, inogona kunge iri iyo chikonzero nei yako iPhone isingamire kudedera. Kuti utarise software yekuvandudza, vhura Zvirongwa uye tap General -> Software Kwidziridza . Kana software yekugadzirisa iripo, tapira Dhawunirodha uye Isa . Kana pasina software yekugadzirisa iripo, ichati iPhone yako yazvino.
Dzima Vibration Yese Pa iPhone
Wanga uchiziva here kuti pane nzira yekudzima kwese vibration pane yako iPhone? Ukaenda ku Zvirongwa -> Kugona -> Bata , unogona kudzima kwese vibration zvakanaka nekudzima switch iripedyo ne Vibration .
Kudzima kwese kudedera hakugadzirise kune chaicho chikonzero nei yako iPhone isingamire kudedera. Dambudziko rinogona kutanga kuitika zvakare kana uchinge wadzosera vibration kumashure. Izvi zvakafanana nekuisa bhendi-rubatsiro pane rakatemwa rinonyatsoda kutemwa!
Kuti ugadzirise dambudziko rakadzama iro rinogona kunge richikonzera kuti iPhone yako irambe ichidedera, enda padanho rinotevera: iyo DFU kudzorera.
Iyo DFU kudzoreredza ndiyo imwechete yakadzika mhando yekudzoreredza iyo inogona kuitwa pane iPhone. Kana iwe ukaisa yako iPhone muDFU modhi uye woidzosera, iyo yese kodhi yayo inodzimwa uye kurodha patsva, iyo ine mukana wekugadzirisa yakadzika kwazvo software matambudziko. Tarisa uone yedu nhanho-nhanho gwara kudzidza maitiro ekuisa yako iPhone muDFU modhi !
Kana yako iPhone ichiri isingamire kudedera mushure mekunge waiisa muDFU modhi, dambudziko iri rinogona kunge richikonzerwa nenyaya yemahara. Iyo mota inodedera, iyo yemuviri chinhu chinoita kuti yako iPhone izungunuke, inogona kunge isiri kushanda.
Kana iwe uine AppleCare + chirongwa che iPhone yako, ronga kugadzwa kuApple Chitoro uye ona zvavanogona kukuitira. Isu tinokurudzirawo Pulse , in-inoda kugadziriswa kambani inozotumira nyanzvi ine ruzivo yakanangana newe!
Iwe wakabudirira kugadzirisa dambudziko uye yako iPhone haizi kudedera zvakare! Inotevera nguva iyo yako iPhone isingaregi kudedera, iwe unobva waziva chaizvo kugadzirisa dambudziko. Kana iwe uine chero mimwe mibvunzo nezve yako iPhone, inzwa wakasununguka kutisiira isu mhinduro pasi pazasi.